बीएएलएलबीः समयको माग कानुन
प्लस टु पछिकाे गन्तव्य-२४
दिनेश गौतम काठमाडौं, २५ भदौ
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ‘प्लस टुपछिको गन्तव्य’ स्तम्भ शुरू गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । आज हामीले ब्याचलर इन ल (BALLB) को विषयमा सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो बीएएलएलबी ?
बीएएलएलबी स्नातक तहको पाँचवर्षे कोर्स हो, जसमा १० वटा सेमेस्टर छन् । कानूनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कोर्स हो । कानून भनेको नियम हो । नियम मैले जानेको छैन । बुझेको छैन । नजानेर गल्ती गरेको हो भन्न मिल्दैन । कानूनको अज्ञानता अक्षम्य हुन्छ । यो विश्वभर प्रचलित मान्यता हो ।
यसले कानूनको ज्ञानको अभावमा भएका अपराध क्षमा हुँदैन भन्ने बुझाउँछ । तर, कानून बुझ्ने कसरी ? कानून बुझ्नका लागि बनाइएको कोर्स बीएएलएलबी हो । बीएएलएलबीपछि नेपालमै एलएलबी कोर्ससमेत पढ्न पाइन्छ । आज हामीले स्नातक तहको बीएएलएलबीको मात्र चर्चा गर्नेछौं ।
कस्ता विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् ?
११ र १२ मा जुनसुकै विषय पढेकाले
जीपीए यति नै ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने छैन
विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा भने पास हुनुपर्छ
पढ्नुपर्ने मुख्य विषय
प्रिन्सिपल अफ ल
कन्सेप्ट अफ ल
इन्टरनेसनल ह्युमन ल
स्नातक तहको कोर्स पढ्न ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ । क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाका आधारमा केही फरक हन सक्छ ।
विश्वविद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । टोटल कोटाको १० प्रतिशतले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक सेमेस्टरमा ३५ जनाको कोटा तोकेको छ । कलेजको भौतिक संरचना भएका कलेजले ७० देखि १०५ जनाको कोटा पनि पाएका छन् ।
कानून दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विषय भएकाले इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न अदालत, ल–फर्ममा विद्यार्थीहरूले इन्टर्नसिप गर्ने गरेका छन् । यसका साथै विद्यार्थीहरूलाई विभन्न ठाउँको भ्रमणसमेत गराइने गरेको छ ।
कति कमाउन सकिन्छ ?
कानून पढेपछि यति नै कमाइ हुन्छ भन्ने छैन । सरकारी जागिर खाएमा सराकारले तोकेको पारिश्रमिकअनुसार पाइन्छ । अदालतमा वकालत गर्ने हो भने आफ्नो क्षमताअनुसार कमाउन सकिन्छ ।
मास्टर्स लेबलको कोर्स पढ्न विदेश जान सकिन्छ । यही देश भन्ने छैन । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर जुनसुकै देश जान सकिन्छ । जाने सम्पूर्ण खर्च विद्यार्थी आफैंले गर्नुपर्छ । विदेशमा पढाइका साथै काम पनि गर्न सकिन्छ ।
कहाँ काम गर्ने अवसर मिल्छ ?
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था
कहाँ–कहाँ पढ्न पाइन्छ ?
स्नातक तहको कानून त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले बीएएलएलबी नाम दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले बीबीएम एलएलबी नाम दिएको छ ।
नेसनल कलेज, सानेपा, ललितपुर
नेपाल ल क्याम्पस, रामशाहपथ, कठामाडौं
पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा, कास्की
काठमाडौं स्कुल अफ ल, भक्तपुर
कलेज अफ ल, बिजुलीबजार, काठमाडौं
ब्राइट भिजन कलेज, मोरङ
काठमाडौं विश्वविद्यालयले अन्य कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छैन । आफैंले काभ्रेको धुलिखेलमा बीबीएम एलएलबी कोर्स सञ्चालन गरेको छ ।
कानून सोसियल इन्जिनियर
रामकृष्ण तिमल्सिनाः प्रिन्सिपल, नेसनल ल कलेज
कानून सोसियल इन्जिनीयर हो, जसले समाजको डिजाइन गर्छ । दूरदराजका नागरिकलाई अझै पनि कानूनका विषयमा धेरै ज्ञान छैन । तर, कानून जानेको बुझेको छैन भन्न पाइँदैन । त्यसैले हरेक नागरिक कानूनबारे जानकार हुनुपर्छ । यसका लागि कानून शिक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालमा कानूनको छुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक छ । क्षेत्रीय रूपमा कानूनका कलेज खोल्नुपर्छ । अनि मात्र दूरदराजका नागिरकलाई कानूनबारे बुझाउन सकिन्छ ।
कानून पढ्नेको आकर्षण बढ्दो छ
लक्ष्मी सापकोटाः सहायक प्रोफेसर, काठामाडौं स्कुल अफ ल
नेपालमा १७ हजारले अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका छन् । लाइसेन्स लिएका सबैले वकालत गर्छन् भन्ने छैन । वकालत गर्नका लागि मात्र कानून पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि गलत हो ।
कानून जोकोहीले पनि जान्नुपर्ने विषय हो । कानून व्यवसायी अझै पुगेका छैनन् । सीमित व्यक्तिको हातमा छ मुद्दा । कानून व्यवसायी कम भएर नै सीमित व्यक्तिको हातमा मात्र मुद्दाको फाइल परेको हो । आम नागरिकलाई बुझाउन पनि कानून पढेको जनशक्ति आवश्यक छ । पछिल्लो समय कानून पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा कानून पढेकोलाई नै कानूनी सल्लाहकारमा राख्ने भएकाले कानून पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । नयाँ संविधान, नयाँ देवानी संहिता छ । दूरदराजका नागरिकलाई कानूनबारे जानकारी गराउन पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ ।
नठगिन कानून जान्नैपर्छ
दीपक कार्की, अधिवक्ता
राज्य चलाउन कानूनको आवश्यक पर्छ । कानूनबिना राज्य चलाउन सकिँदैन । कानून जोकोहीले पनि जानेको हुनुपर्छ । दैनिक जीवनमा कानून नभई हुँदैन ।
कानूनबारे जानकार भएनौं भने ठगिन्छौं । नठगिनका लागि पनि कानून जान्नैपर्छ । पहिले इन्जिनीयर पढें । तर, कानून नभई नहुने भएकाले पछि ल पढें । अहिले वकालत गरिरहेको छु ।
पछिल्लो समय ल पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । अन्य विषय पढेकाले पनि ल पढ्न थालेका छन् । पहिले युवाले भन्दा पनि वयष्कले ल पढ्ने गर्दथे । तर, अहिले युवा पनि ल पढ्न थालेका छन् । नेसनल ल कलेजमा बीएएलएलबी पढेकी स्नेहा शर्मा भन्छिन्, ‘कानून महत्त्वपूर्ण कोर्स हो, समाजमा भएका नकारात्मक कामलाई रोक्न कानून आवश्यक पर्छ ।’
अहिले मुलुकमा तीन तहका अदालत छन्, जहाँ न्याय निरुपण हुन्छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च । सर्वोच्च संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो । यसका साथै राज्यले केही विषयगत अदालतको पनि अभ्यास गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका लागि विशेष अदालत छ, त्यस्तै प्रशासनिक अदालत, सैनिक अदालत यसका उदाहरण हुन् । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको गठन भएपछि सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समितिहरूको गठन भएको छ ।
केही वर्षअघिसम्म न्यायिक अभ्यास गर्नेहरूका लागि मात्र कानूनी शिक्षा चाखको विषय हुन्थ्यो । तर, अब त्यसमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । अन्य क्षेत्र, पेशासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि यतातर्फ आकर्षित भएका छन् । कर्मचारी, पत्रकारहरूमा कानून पढ्ने तदारुकता बढ्नु यसको उदाहरण हो । यी सबै कुराले कानूनको महत्त्व झल्काउँछ ।
सम्भावनाका दृष्टिले हेर्दा यसको सम्भावना बढ्दै गएको छ । प्रायः कम्पनीहरूले कानूनी सल्लाहकार राखेका छन् । त्यति मात्र होइन, लेनदेनलगायतका विषयमा पनि कानून पढेको व्यक्तिले गरेको कागजमा कार्यविधिगत प्रक्रियाका कारण सामान्यभन्दा बढी अदालती प्रक्रियामा ग्राह्य हुन्छ । त्यसैले कानून शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
उद्यमी बन्न ‘बीबीएम’ अध्ययन
वन विज्ञान : नर्सरीदेखि पर्यटनसम्म अवसर
बी फार्म : हस्पिटलदेखि कम्युनिटी फार्मेसीसम्म अवसर
एमबीबीएसको तिर्सना ‘बीएमएलटी’
डेभलपमेन्ट स्टडिज्: समृद्धि र दिगो विकासको आधार
कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढे अवसरै अवसर
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ : हाइड्रोमा काम, प्रशस्त दाम
ब्याचलर इन फिल्म स्टडिज् :अभिनयदेखि निर्देशनसम्म अवसर
कम्प्युटर इन्जिनियरिङको विकल्प ‘सीएसआईटी’
लिबरल आर्ट्सः विकास बुझेपछि जागिर पक्का
टेलिकमदेखि विद्युतीय उपकरण निर्माणसम्मको अवसर
कृषि शिक्षा, आजको आवश्यकता
आईटी र व्यवस्थापनका लागि ‘बीसीआईएस’
पथप्रर्दशक शिक्षाको मेरुदण्डः ट्राभल एन्ड टुरिजम
एयर होस्टेज : थोरै खर्चमा छिटो जागिर
बीसीएः किन पढ्ने ? कहाँ पढ्ने
बीएचसीएम : सेवा पनि करियर पनि
होटल म्यानेजमेन्टः कमाउँदै, पढ्दै
सोसियल इन्जिनियर बन्न बीएसडब्लूू
डेभलपमेन्ट फाइनान्स : एनजीओदेखि बैंकसम्म करिअर
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २५, २०७६, २१:५२:००
ओलीको अभिव्यक्ति कुर्ची जोगाउने अस्त्र र राजनीतिक स्टन्ट : गगन थापा
सम्भव छ साउनकाे पहिलो साताबाट विद्यालय खोल्न ?
कोरोनाः परीक्षण घट्दा संक्रमित घटे, डर बढेको बढ्यै
कोरियामा नेपाली श्रमिकको तलब बढ्यो
लेखा समितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा बहस, कसले के भने ?
नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट ल्याउन बन्द गराउन धर्ना
पोलिमर नोट प्रकरणमा पूर्व गभर्नरसहित ३ जनालाई सफाइ
१३ हजार घूस रकमसहित मालपोतका नासु पक्राउ
प्रदेश २ मा २४ घन्टामा ६७ जना कोरोना संक्रमित थपिए
१ मिनेटको चलाखीले जोगिएको ७ ज्यान
ठगी आरोपमा ज्योतिषी अर्जुन क्षेत्री पक्राउ
गुण्डा नाइके विकास दुबेका सहयोगी अमर दुबे इन्काउन्टरमा मारिए
अन्तिम दिन बुबाले भन्नुभो : म मर्ने बेला भो, अब दियो बाल
अन्त्येष्टि गरेको ९ दिनमा जीवितै फर्किएपछि ...
मोहन मैनाली अर्थात् ‘कसाई सम्पादक’